एमालेबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सभाका पाण्डेले दिए राजीनामा, २ सांसद विपक्षी गठबन्धनमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दृगनारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका छन् । सत्तारुढ एमालेबाट निर्वाचित उनले प्रदेश सभा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीसमक्ष राजीनामा दिएका हुन् ।
सभामुख घर्तीका स्वकीय सचिव ध्रुवविक्रम वलीका अनुसार पाण्डेले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट आइतबार दिउँसो राजीनामा दिएका हुन् ।
एमालेको सूर्यचिह्न लिएर स्वतन्त्र तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित अजय शाही र धर्मलाल श्रीवास्त भने विपक्षी गठबन्धनमा लागेका छन् ।
शाही र श्रीवास्तवले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा लागेका छन् । दुवैले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
* स्वतन्त्र तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित अजय शाही र धर्मलाल श्रीवास्त विपक्षी गठबन्धनमा लागेको हुनुपर्नेमा राजीनामा दिएको भन्ने शब्दावली पर्न गएकोमा सच्याइएको छ ।- सम्पादक
प्रकाशित : वैशाख १९, २०७८ १६:२१
जाजरकोटमा झाडापखालाबाट दुई बालकको मृत्यु
वैशाख १९, २०७८ भीमबहादुर सिंह
जाजरकोट — कुशे गाउँपालिका–८, औलरिजामा झाडापखालाले दुई बालकको मृत्यु भएको छ । पखालाका कारण औलरिजामा एक वर्षीय पुजना तिरुवा र ९ महिनाका जगत खड्काको मृत्यु भएको हो । पखाला लाग्ने, वान्ता हुने र ज्वरो आउने लगायत लक्षण देखा परेका दुवै जनालाई उपचारमा लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको हो ।
छोरा जगतलाई पखालाका साथै वान्ता आउन थालेपछि उपचारका लागि स्थानीय मेडिकलमा लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको बाबु खिमबहादुर खड्काले बताए ।
झाडापखालाले गाउँमा दर्जन बढी दुधे बालक बिरामी परेको खड्काले बताए ।
बालबालिका बिरामी परेको खबर आएपछि जाजरकोट अस्पतालका डा. इन्द्र थापाको टोली औषधिसहित औलरिजा पुगेको डा. अमिन शाहले बताए । टोलीले औलरिजामा झाडापखालाका ४०/५० जना बिरामीको उपचार गरेको डा. शाहले बताए । ओलरिजाको झाडापखाला नियन्त्रणमा आएको र बिरामीको अवस्था सामान्य रहेको उनले बताए ।
प्रकाशित : वैशाख १९, २०७८ १५:५९